कोरोनासँग लड्न नेपाली चलचित्रकर्मीहरुको सहयोग, कसले कती गरे ? (भिडियोसहित) – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/कोरोनासँग लड्न नेपाली चलचित्रकर्मीहरुको सहयोग, कसले कती गरे ? (भिडियोसहित)
कोरोनासँग लड्न नेपाली चलचित्रकर्मीहरुको सहयोग, कसले कती गरे ? (भिडियोसहित)
काठमाडौं ।विश्वभर कोभिड १९ को महामारी फैलिएसँगै यसको नियन्त्रणको लागी र यसबाट पीडित विपन्न समुदायहरुको लागी नेपाली चलचित्र क्षेत्रबाट पनि सहयोग रकम जुट्न थालेको छ ।
कोरोना संक्रमणसँग लड्न सबैभन्दा धेरै आर्थिक सहयोग गर्ने कलाकार हुन् पल शाह । उनले दैनिक ज्यालादारीमा जीविकोपार्जन गर्ने चलचित्र प्राविधिकहरुको राहतका लागि ५ लाख १ हजार सहयोग गरेका थिए ।
चलचित्र निर्माता तथा छायांकार गौतम धिमालले पनि चलचित्र प्राविधिकहरुको लागी २ लाख २५ हजार बराबरको राहतको जिम्मा लिएका छन् । उनको सहयोगबारे चलचित्र प्राविधिक संघका अध्यक्ष पुष्कर लामाले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत खुलाएका छन् ।
निर्माता तथा निर्देशक श्री कृष्ण चापागाईंले चलचित्र प्राविधिकहरुको राहतका लागी १ हजार डलरसहयोग गरेका छन् । उनले उक्त रकम बराबरको राहत प्राविधिकहरु समक्ष पुर्याउन प्राविधिक संघका अध्यक्ष पुष्कर लामासँग सहकार्य गरेका छन् ।
हाँस्यकलाकार तथा निर्माता दीपकराज गिरीले पनि आफ्नो चलचित्र छक्कापन्जाको टिमसँग मिलेर रकम सहयोग गरेका छन् । उनले चलचित्र प्राविधिकहरुका लागि १ लाख २० हजार बराबरको खाद्यसामग्री चलचित्र प्राविधिक संघलाई बुझाएका हुन् । यससँगै हाल उनी अन्य फिल्मकर्मीहरुको सहयोग रकम संकलन गर्ने कार्यमा पनि सक्रिय रुपमा लागेका छन् ।
कलाकारहरुमा सबैभन्दा पहिले सहयोग रकम घोषणा गर्ने अभिनेत्री हुन् वर्षा सिवाकोटी । उनले कोरोना संक्रमणसँग बच्न र यसको रोकथाम गर्न नेपाल सरकारले खडा गरेको प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १ लाख रुपैँयाँ सहयोग गरेकी थिईन् । यससँगै उनी लकडाउनमा घरबाहिर भोकै परेका जनावरहरुलाई खाना खुवाउने अभियानमा पनि सक्रिय रुपमा लागिरहेकी छिन् ।
अभिनेत्री प्रियंका कार्की र उनका श्रीमान अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशीले पनि रकम सहयोग गरेका छन् । लकडाउनको समयमा सबैले मानव समस्या समाधान गर्न सहयोग गरिरहँदा प्रियंका र आयुष्मानले भने घरबाहिर भोकै रहेका जनावरहरुको खानाको लागि रकम सहयोग गरेका हुन् । उनीहरुले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको एनजीओ ‘आयांका फाउन्डेशन’ मार्फत ‘एनिमल नेपाल’ नामक संस्थालाई १ लाख हस्तान्तरण गरेका थिए ।
अभिनेत्री वर्षा राउतले पनि चलचित्र प्राविधिकहरुका लागि ५१ हजार बराबरको खाद्य सामग्री वितरण गरेकी छिन् । निर्माता अर्जुन कुमारले पनि कोरोनासँग लड्न प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५० हजार रकम सहयोग गरेका छन् । कलाकार कृष्ण मल्लले प्राविधिकहरुका लागी ३० हजार रकम सहयोग गरेको जानकारी गराएका दिए । कलाकार पुष्कर राउतले पनि प्राविधिकहरुको सहयोगका लागि १५ हजार रुपैँया बराबरको राहत सहयोग गरेका छन् ।
यसैगरी फिल्मकर्मीहरु केकी अधिकारी , ऋचा शर्मा , नीता ढुंगाना, साकार पन्त, स्वस्तिमा खड्का, रमेश उप्रेती, अनुरागमान सिँह कुवर , गौरव पहारी, अनुप भट्टराइ, लक्ष्मण सुबेदी लगायत पनि प्राविधिकका लागी सहयोग गर्न सम्पर्कमा आएको बुझिएको छ ।
कोरोना भाइरससँग लड्न नेपाली कलाकर्मीहरु पनि अग्रसर भएका छन्
विश्वभर कोभिड १९ को महामारी फैलिएसँगै यसको नियन्त्रणको लागी र यसबाट पिडित विपन्न समुदायहरुको लागी चलचित्र क्षेत्रबाट पनि सहयोग रकम जुट्न थालेको छ । पछिल्लो समय धेरैजसो नेपाली चलचित्रकर्मिहरुले आफ्नो तर्फबाट सक्ने रकम र राहत सहयोग गरिरहेका छन् ।
Gepostet von Kendrabindu – केन्द्रबिन्दु am Montag, 6. April 2020
मृत्युपछि सासुले सबै सम्पत्ति बेचेर पोइल गइन, आमा-छोराको विचल्ली -सहयोग अपिल
ए’सिड पी’डित पवित्रालाई भेटेपछि थामिएन विद्यार्थीहरुको आँशु, भावविव्हल बन्यो अस्पताल (भिडियो)
पोखरामा नागरानीबाट बिछोडीएका नाग राजाले धर्ती फटाए, उनको रि’सलाई शान्त पार्न यसरी गरियो पूजा (भिडियोसहित)
ए’ सिड पी ’ डितको माग : आ ’ क्रम ’ णकारीलाई जन्मकै’ दको स ’ जाय ( भिडियो)